AKHRISO: Guddoomiye Mursal oo ku dhawaaqay in laga tanaasulay Mooshinkii Madaxweynaha. | Weheliye Online
AKHRISO: Guddoomiye Mursal oo ku dhawaaqay in laga tanaasulay Mooshinkii Madaxweynaha.
War Qoraal ah oo uu goor dhaw soo saaray Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa shaaciyay in uu meesha ka baxayMooshinkii 9-kii bishan laga gudbiyay Madaxweyne Farmaajo.
Gudoomiyaha ayaa dhowr qodo u cuskaday in mooshinka uu baaba,ay, In ay 14 xildhibaan laga been abuuray oo
Guddoomiyaha ayaa qodobo kala duwan u cuskaday in mooshinka uu buray, sida in 14 Xildhibaan ay ka dacwoodeen in aanay saxiixin mooshinka iyo in aanu dalku laheyn weli Maxkamad Dastuuri ah ee qaadi laheyd dacwada Madaxweynaha.
Arrintan ayaa imaaneysa, iyadoo labadii maalmood ee u dambeysay ay wada hadalo hoose ah socdeen, lama oga illaa hada waxa lagu heshiiyay ama lagu bedeshay tanaasulka Mooshinka oo noqday mid dhabar jab xooggan ku aheyd Madaxweynaha.
Mana la hubo sida ay uga fal celin doonaan xildhibaanadii mooshinka keenay oo aan wali ka hadlin.
Halkan hoose ka akhriso qoraalka:-
Previous articleDEG DEG: Gudoomiyaha BFS Oo lagu wado in uu ku dhawaaqo in uu buray Mooshinka Laga keenay M.Farmaajo
Next articleCiidamada NISA oo gacanta ku dhigay mid kamid ah Ragga miinooyinka ku dhajiya Gawaarida kana tirsan Al-shabab